ဂီတာရှိတ်လေး လို့ အချိုး အစားကျလွန်းတဲ့ အဖုအထစ်လေးတွေက ရင်ဖို လှိုက်မောဖွယ် ညို့အားပြင်း နေတဲ့နွယ်နွယ်ထွန်း – Cele Oscar
ပရိသတ်ကြီးရေ.. ပုရိသပရိသတ် တွေရဲ့ တစ်ခဲနက် အားပေးချစ်ခင်မှုတွေကို အများဆုံး နဲ့အခိုင်အမာဆုံး ရရှိထားတဲ့ Sexy မော်လ်ဒယ် မင်းသမီးချောလေးတွေထဲမှာ ရစ်လို့ အားလုံးက ချစ်နိုးခေါ်ကြတဲ့ နွယ်နွယ်ထွန်း ကလည်း အပါအဝင်ပါပဲနော်..။ညို့အားပြင်းပြီး အချိုးအစား ကျတဲ့ကောက်ကြောင်းအလှတွေကိုညပိုင်ဆိုင်ထားပြီး အသည်းယားစရာကောင်းလွန်းတဲ့ ဟန်ပန်လေး တွေနဲ့လည်း ဖမ်းစား တတ်တဲ့ ရစ်ရစ်ကတော့ တကယ်ကိုဆိုးနွဲ့တဲ့ပုံစံလေး နဲ့ ချစ်စရာကောင်းသူလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော်..။
သူမရဲ့မခို့တရို့ဟန်ပန် ပုံရိပ်လေးတွေကို အမြဲမျှဝေလေ့ ရှိတဲ့ ရသ်ရစ်ကတော့ အခုတစ်ခါ မှာလည်း အချိုးအစားကျလွန်း တဲ့ကောက်ကြောင်းတွေကို အထင်းသားပေါ်လွကယင်နေတဲ့ အမိုက်စားပို့စ်ပေး ဓာတ်ဖမ်ားးတဲ့ ပုံရိပ်လေးတွေနဲ့ အချစ်ပိုစေ ပြန်ပါတယ်နော်..ဂီတာရှိတ်လေး လို့အချိုးအစားကျ လွန်းတဲ့ အဖုအထစ်ကောက်ကြောင်းတွေက မြင်သူပုရိသတွေ တိုင်းကို ရင်ဖိုလှိုက်မောဖွယ် ညို့အားပြင်းနေ တဲ့နွယ်နွယ်ထွန်းရဲ့ အမ်ုက်စားပုံရိပ်လေး တွေကတော့ တကယ်ကို စွဲမက်စရာကောင်းလွန်းပါတယ်နော်..။
“ခုတလော အရမ်းတွေလှချင် လာတာ မင်းကြောင့်များလား??❤️..” ဆိုပြီး ကျော့ရှင်းတဲ့ အလှတရားတွေ အထင်းသား ပေါ်လွင်နေပြီး မြင်သူတိုင်းကို အသည်းယားအောင် အချစ်ပိုစေတဲ့ သူမရဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကိ ဝေမျှထားတာ ဖြစ်ပါတယ်နော်..။အဲ့ဒီပို့သ်ရဲ့အောက်မှာ်တော့ ပုရိသပရိသတ် တွေရဲ့ ချစ်ခင်ကြတဲ့ Comment လေးတွေအပြင် မိန်းကလေးပရိသတ် တွေကပါ သဘောကျစွာ ချစ်ခင်အားပေးနေကြတာကိုလည်း မြင်တွေ့ရပါတယ်နော်..။
သတင်းအရင်းမြစ်: Nwe Nwe Tun’s fb Acc
ပရိသတျကွီးရေ.. ပုရိသပရိသတျ တှရေဲ့ တဈခဲနကျ အားပေးခဈြခငျမှုတှကေို အမြားဆုံး နဲ့အခိုငျအမာဆုံး ရရှိထားတဲ့ Sexy မျောလျဒယျ မငျးသမီးခြောလေးတှထေဲမှာ ရဈလို့ အားလုံးက ခဈြနိုးချေါကွတဲ့ နှယျနှယျထှနျး ကလညျး အပါအဝငျပါပဲနျော..။ညို့အားပွငျးပွီး အခြိုးအစား ကတြဲ့ကောကျကွောငျးအလှတှကေိုညပိုငျဆိုငျထားပွီး အသညျးယားစရာကောငျးလှနျးတဲ့ ဟနျပနျလေး တှနေဲ့လညျး ဖမျးစား တတျတဲ့ ရဈရဈကတော့ တကယျကိုဆိုးနှဲ့တဲ့ပုံစံလေး နဲ့ ခဈြစရာကောငျးသူလေးပဲ ဖွဈပါတယျနျော..။
သူမရဲ့မခို့တရို့ဟနျပနျ ပုံရိပျလေးတှကေို အမွဲမြှဝလေေ့ ရှိတဲ့ ရသျရဈကတော့ အခုတဈခါ မှာလညျး အခြိုးအစားကလြှနျး တဲ့ကောကျကွောငျးတှကေို အထငျးသားပျေါလှကယငျနတေဲ့ အမိုကျစားပို့ဈပေး ဓာတျဖများးတဲ့ ပုံရိပျလေးတှနေဲ့ အခဈြပိုစေ ပွနျပါတယျနျော..ဂီတာရှိတျလေး လို့အခြိုးအစားကြ လှနျးတဲ့ အဖုအထဈကောကျကွောငျးတှကေ မွငျသူပုရိသတှေ တိုငျးကို ရငျဖိုလှိုကျမောဖှယျ ညို့အားပွငျးနေ တဲ့နှယျနှယျထှနျးရဲ့ အမျုကျစားပုံရိပျလေး တှကေတော့ တကယျကို စှဲမကျစရာကောငျးလှနျးပါတယျနျော..။
“ခုတလော အရမျးတှလှေခငျြ လာတာ မငျးကွောငျ့မြားလား??❤️..” ဆိုပွီး ကြော့ရှငျးတဲ့ အလှတရားတှေ အထငျးသား ပျေါလှငျနပွေီး မွငျသူတိုငျးကို အသညျးယားအောငျ အခဈြပိုစတေဲ့ သူမရဲ့ပုံရိပျလေးတှကေိ ဝမြှေထားတာ ဖွဈပါတယျနျော..။အဲ့ဒီပို့သျရဲ့အောကျမျှာတော့ ပုရိသပရိသတျ တှရေဲ့ ခဈြခငျကွတဲ့ Comment လေးတှအေပွငျ မိနျးကလေးပရိသတျ တှကေပါ သဘောကစြှာ ခဈြခငျအားပေးနကွေတာကိုလညျး မွငျတှရေ့ပါတယျနျော..။
သတငျးအရငျးမွဈ: Nwe Nwe Tun’s fb Acc